Ogaden News Agency (ONA) – Haile-Mariam Desalegne waa kuma?
Haile-Mariam Desalegne waa kuma?
Posted by ONA Admin	/ August 20, 2012
Laga soo bilaabo 2010 waxaa si aad ah loo maqlayay magaca R/W ku-xigeenka ahna Wasiirka Arimaha Dibadda ee dalka Itobiya. Intii ka horesysay laga soo bilaabo 2006, wuxuu Madaxweyne ka ahaa gobolada Koonfureed ee la’isku yidhaahdo Qawmiyadaha Koonfur ama Southern Nations, Nationalities, and People’s Region (SNNPR). 2006dii ayaa loo magacaabay Ku-xigeenka R/W, 2010 waxaa loogu daray jagada Wasiirka Arimaha Dibadda. Mudadii ka dambaysay wuxuu kawada ariminayay jagooyinka kala ah; Ku-xigeenka gudoomiyaha EPRDF, Gudoomiyaha xisbiga reer Koonfureedka ee SEPDM, Ku-xigeenka R/W iyo Wasiirka AD.
Wuxuu ku dhashay Degmada Boloso Sore oo ka tirsan Gobolada Koorfur. 1988 ayuu shahaada jaamici oo Enjineernimo ah ka qaatay jaamacadda Addis Ababa, ka dib wuxuu ka helay deeq Waxbarasho dalka Finland halkaasoo uu ka soo qaatay jaamacadda Tampere University of Technology shahaadada master-ka. Intii u dhexeysay 1990 ilaa 2000 ayuu siyaasadda aad u soo dhexgalay isagoo ku biiray xisbiga talada qabtay ee EPRDF noqdayna Ku-xigeenka M/W gobolka SNNPR. Markay kala jabeen 2000 ururka TPLF-ta oy labada garab isku qabteen wuxuu ka mid ahaa xubnihii EPRDF-ta ee sida aadka ah u taageeray K/T Meles. Markuu ku guulaystay hardankii Meles Zinawi wuxuu isla markiiba ka qaaday jagadii oo xabsiga dhigay isagoo lagu eedeeyay musuq-maasuq iyo inuu lacag lunsaday M/W gobolada Koonfureed Abate Kisho, waxaana loo dhiibay R/W ku-xigeenka Haile-Mariam Desalegne. Laga soo bilaabo waqtigaa wuxuu ahaa ninka uu Meles ku aamino sirtiisa.
Hadda markii uu saaxada ka baxay K/T Meles waxaa ka dhex bilowday EPRDF dagaal hoose oo aan waxba la’isula hadhin, gaar ahaan xubnaha TPLF oo ah ururka dhab ahaan u xukuma Itobiya. 2dii bilood ee la qarinayay xaaladda uu ku sugan yahay Meles oo hadda la odhan karo 99.99% wuu bakhtiyay, waxaa fooda iskula jiray xubnaha TPLF oo sidaan horey us oo sheegnay laba u kala jabnaa oo madaxyada boostoolado isaga hayay. Safaaradaha reer Galbeedka oo damcay inay dhex-dhexaadiyaan kuma aanay guulaysan arintaa, sidoo kale CIA-ada oo aad uga walwalsan inuu kala yaac ka dhaco ayaa faraha kula jirtay in si sahlan loogu wareejiyo xukunka qof aan ahayn qawmiyadda Tigreega, si loo yareeyo gadoodka qarsoon iyo burkaanka laga yaabo inuu goor dhow furka tuuro.
Warar hoose ayaa hadda soo yeedhaya oo sheegaya in ugu dambayn lagu dhex-dhexaadiyay inuu jagada qabto Ku-xigeenkii Meles Haile-Mariam oo lagu dhawaaqi doono goor aan fogayn, hadaanay arima kale soo bixin ama uusan ka dicing inqilaab la mid ah inqilaabkii uu Meles Zanawi ku sameeyay xubnihii hore ee TPLF.
Mr. Haile-Mariam Desalegne oo ka mid ah shucuubta sida aadka ah loogu dulmay Itobiya oo la odhan karo waa la gumaysan jiray kacdoonkii Dargiga wixii ka horeeyay ayaa la filayaa haduu jagada qabto inuu wax weyn ka badalo caqliga isla-weynaanta ah ee qawmiyadaha Waqooyiga Itobiya daga ay qabaan.
Arimahaa iyo kuwa kaleba isha halugu hayo.
who cares if he become ethiopia prime minister because he may not ablle to change any thing because he will work under tegray power